कहाँ Santorini मा रहन | सडकको लागि एक युगल
कहाँ स्यानोटोनिमा रहन
अक्टोबर 7, 2018 / 8 टिप्पणिहरु
सान्टोरेनीमा बस्ने कहाँ छनौट गर्ने, ग्रीस यात्रामा हुने सजिलो निर्णयहरू मध्ये एक हो। किन? यो सरल छ - त्यहाँ is कुनै खराब स्थान (वा बाहिरी, मा) Santorini मा रहन।
ग्रीसको सबैभन्दा लोकप्रिय टापु, यसको नीलो-छातीको डुङ्गा र सेतो-भाडाको पर्खालका लागि चिनिन्छ, संसारको सबैभन्दा ठूलो फोटो खिचिएको स्थान हो, र पर्यटकहरूको लागि बाल्टी-सूची गन्तव्य। यो ती ठाउँहरू मध्ये एक हो कि तपाईं लाग्छ तपाईं जानु अघि सुन्दर हुनेछ, केवल यो पत्ता लगाउनको लागी, कुनै फोटो मा भन्दा धेरै अधिक captivating।
सैंटोरेनि ग्रीक आइल्याण्ड हो, केवल एन्टेन्सबाट 45 मिनेटको बारेमा मात्र। द्वीपको अनौपचारिक आकार, ईजियन सागरको एक चौथो चिसो उचाई, वास्तवमा अवशेष भनेको ठूलो, ज्वालामुखी टापु हो।2शताब्दी ईसापूर्वमा प्रसिद्ध मिनोइन विष्फोट सहित विनाशकारी भूकम्प गतिविधि को हजारौं पछि, टापु बिस्तारै छोड्यो - सेन्टोरिनी छोडिएको बाहिरी भाग जस्तै।
नक्सा - सैंटोरेनिको सबभन्दा राम्रो सहर, होटल्स, र गन्तव्यहरू
द्वीप धेरै साना शहरहरु, गाँउहरु र बस्तियों मा अलग छ। प्रायः केहि माइल लामो समयको कुरा हो, प्रत्येकको सिमानालाई छोटो रूपमा सावधानीपूर्वक। यी मध्ये धेरै भन्दा प्रसिद्ध छ, ओआ टापु को उत्तर उत्तर मा स्थित छ, र फिरा, शहर को केन्द्र र हवाई अड्डा को नजिकै एक।
त्यहाँ स्यानोटोनीमा बसोबास गर्ने थुप्रै विकल्पहरू छन्, तर हामी मात्र ओआइ र फेरामा डुब्न सक्नेछौं, तर अन्य प्रसिद्ध शहरहरू यहाँ रहन र तपाइँ किन ती क्षेत्रहरूमा आधारित विचार गर्नुपर्छ तपाईँ कुन हेर्नु हुन्छ र स्यानोटोनीमा गर्छौं। (यदि तपाइँ चीजहरूको बारे थप जान्नुहुन्छ भने do Santantini मा, Santorini मा गर्न को लागी चीजहरूको पूर्ण सूची जाँच गर्नुहोस्).
यो धेरै प्रसिद्ध छ जो तपाईले स्यान्टोरिनका आगन्तुकबाट हेर्नु भएको ठूलो सूर्यास्त फोटोको स्थानमा हुनुहुन्छ - तपाईले एकलाई थाहा छ। डुप्लिकेट पेंट गरिएको समुद्रको नीलो, नीलो डोमहरू र सेतो पर्खालहरू (वास्तवमा शहरको सबै भवनहरूको लागि स्वीकृति भनेको हो कि तिनीहरू बाहिरको चियामा सेतो सेतो चित्रण गर्नु पर्छ)।
यो पनि अयोग्य भव्य छ, र Santorini मा रहने को लागि सबै भन्दा राम्रो ठाउँहरु मध्ये एक।
त्यसैले, समस्या के हो? किन हुँदैन सबैलाई Oia मा रहन? राम्रो तरिकाले, एक आदर्श दृष्टिकोण प्राप्त गर्न, तपाईं चाहानुहुन्छ यदि ओयामा रहन, तपाइँ यसको लागि तिर्न जाँदै हुनुहुन्छ। होटल्स $ 300 USD देखि $ 1,000 USD प्रति रात र रिंग सम्म। त्यहाँ एक किशोरी छनौटहरू कम छन्, तर तपाइँ निश्चित रूपमा अवलोकनको बलिदान गर्नुहुन्छ।
कहाँ बस्ने: Esperas Santorini Oia मा हाम्रो मनपर्ने स्थानहरु मध्ये एक हो, र मूल्य निर्धारण देखि मामूली (उर्फ को लागि) हो। कोठाहरू लगभग $ 250 USD प्रति रातमा सुरु हुन्छ।
फिरा (या, फिरा टाउन, स्थानीयहरु लाई यो कल गर्दछ)
फिरा द्वीप को अधिक केन्द्रित छ, ओएन देखि 25 मिनेट को ड्राइव डाउनहिल स्थित छ। जब तपाईं फिराबाट उही सूर्यास्त दृश्य प्राप्त गर्नुभएन, यो तपाईंको तस्बिरहरू प्राप्त गर्न ओरेको छोटो यात्रा हो। साथै, फिरा टाउन बिल्कुल भव्य छ, र हाम्रो मनपर्ने ठाउँहरु मध्ये सैंटोरेनीमा बस्ने।
यो क्षेत्र एक सानो अधिक अधिवेशन, मिश्रण उच्च-अन्त, विलासिता स्थानहरु धेरै सस्ती (र अझै पनि राम्रो) संग होटल छ जो कि Santorini देखि पानी को एक महान दृश्य प्रदान गर्दछ, र ज्वालामुखी caldera। साथै, फिरा भोजनको लागि उत्कृष्ट स्थानहरू मध्ये एउटा हो, साइट-डाउन, डेट-रातका प्रतिष्ठानहरू सबै प्रकारको चलिरहेको ज्योरो पसलहरूमा आधारित छन् जसले क्लासिक, स्वादिष्ट ग्रीक भाडाको सेवा गर्दछ।
कहाँ रहन: हामी वास्तवमा आंशिक छौं Theoxenia Hotel। यो सम्भवतया सबै भन्दा राम्ररी विकल्पहरू कोठामा "फैंसी" को सन्दर्भमा होइन, तर यो अझै पनि आकर्षक, विशाल छ, र सेवा र मूल्य अविश्वसनीय छ। वास्तवमा, मलाई स्यानोटोनीमा बिरामी भएको बेला, हामीलाई हामीलाई क्लियरमा कलर-फाउण्डेसनको सुत्न सुत्नमा नि: शुल्क अपग्रेड दिनुभयो। अब, त्यो एक फैंसी थियो!
Pyrgos Santorini को एक अलग दृश्य प्रदान गर्दछ, र पुरा द्वीप मा उन्नयन को मामला मा उच्चतम गाँउ हो। पिरिगोसले तपाईलाई फिरा वा थरामा भेट्टाउने दृश्य छैन, यो थराबाट मात्र एक 10-मिनेट ड्राइव छ, र निकै सानो पर्यटक पदचिन्ह छ।
यदि तपाईं सान्टोरेनिमा कहाँ बस्नु भएको जस्तो लाग्छ, र तपाईले अझ राम्रो प्रमाणपत्र चाहानुहुन्छ जुन साँचो ग्रीक शहरको अनुभव छ, पिरागोस प्रयास गर्नुहोस्। किन? खैर, हामी चुने फोटोमा ध्यान दिनुहोस् र तपाईं थाहा पाउनुहुनेछ! पिरागोसले टापुमा सबैभन्दा राम्रो रेस्टुरेन्टहरू छन्, र सबैले ओया वा सेन्टोरिनमा के पाउन सक्नु भन्दा सस्ता सस्तो छ।
कहाँ बस्ने: आर्ट होटल पिरागोसमा आश्चर्यजनक छ, र प्रति रात $ 100 USD भन्दा कम हुन सक्छ।
यदि "अक्रोरीरी" नाम परिचित छ भने, यो हुनुपर्छ। यो वास्तवमा एक हराएको मिनोन सभ्यताको नजर हो जुन 1967 पछि गहन उत्खननको साइट हो। वास्तवमा, केही विश्वास गर्छन् कि अकतोटीरी अटलांटिसको हराएको शहरको रूपमा प्लेटो द्वारा बोल्ने खण्डहरू हुन सक्छ!
अक्टोट्रिरी एक पौराणिक शहर हो कि होइन वा जीवन आउनको लागी आएको छ, यो अझै पनि रहन एक महान ठाँउ हो। अक्रोरीरी एक कम-ट्राफिक हो, स्यानोटोनीको नजिकैको दक्षिणमा सुन्दर ब्ल्याक रेत समुद्र तटहरू संगको क्षेत्र बनाइयो।
जहाँ कहाँ बस्नु हुन्छ: अकतोटिरीमा होटेलको लोकप्रियता छैन, जो उपलब्ध छन् सुन्दर, सस्तो, र आराम। प्रयास गर्नुहोस् Mathios Village समुद्र तट र खंडहर नजिकै छ - एक आश्चर्यजनक परिसर।
Megalochori एक स्थान हो जहाँ सामान्यतया सोनोनिनी मा रहन को लागी सूची मा नहीं मानिन्छ, तर यो हुनु पर्छ। मेगलुकोरी वास्तवमा एक पुरानो, मौलिक, र प्रामाणिक गाँउ हो जुन मुख्यतः आक्रोरीरीको थोता उत्तरमा आवासीय छ, तर अझै पक्कै पनि फेरा तलको दक्षिणी अन्तमा। यसको फूल र रूख-रेखांकित, कोबलबेड सडकहरू अविश्वसनीय रूपमा रोमान्टिक छन् र स्यानोटोनीमा एक ठाउँ हामी वास्तवमा प्रेम गर्छौं।
यो भव्य, मूर्खतापूर्ण छ, र सैंटोरेनिमा सबै चीजहरू जस्तै, तपाई सबै हेर्न चाहनु भएको नजिक हुनुहुन्छ। खाना अद्भुत छ र स्थानीयहरू अविश्वसनीय मित्रता हुन्।
कहाँ बस्ने: विला एजियन एक महान, सानो, देहाती स्थान संग Santorini को सुंदर छत दृश्य संग।
Ammoudia Santorini मा रहन एक महान ठाँउ हो कि वास्तव मा उत्तर मा मा एक धेरै सानो बंदरगाह - यो भन्दा पनि परे। वास्तुकला र खाना दुवै अचम्म लाग्दछन्, जस्तै स्थानीय कुकुरबाट आइपुगेका एजजनले ताजा, सफा गरे र कहिलेकाहीँ एक घण्टा भित्र सेवा गरे र प्लेटमा ल्याए।
यदि तपाइँ पशु प्रेमी हुनुहुन्छ भने, यो स्यानोटोनीको अन्य सुविधाहरू - बिल्लियों मध्ये एक को लागि पनि राम्रो स्थान हो! स्यानोटोनी द्वीपमा भोक बिल्लियों को मात्रा को लागि जानिन्छ, केहि क्षेत्रहरु संग अन्य भन्दा अधिक छ। चिन्ता नगर्नुहोस्, सँगी जनावर प्रेमीहरू, यी बिरालोहरू राम्ररी खुवाउने, खुसी हुन्छन् र बिल्कुल मनमोहक छन्। केवल फोटोमा हाम्रा साना साथीहरू हेर्नुहोस्!
जहाँ बस्न: अमोदमिया महँगो छैन, तर विकल्पहरू कम छन्। तपाईं प्रति रात $ 50-60 USD मा धेरै होटेलहरूमा पुग्न सक्नुहुनेछ, तर तिनीहरू सरल कोठा हुनेछन् (सफा र सुरक्षित)। हामी मनपर्यो विला Ikaros एक धेरै सस्ती, उचित आराम को रूप मा रहन को लागि।
Karterados फेरा टाउन को पछि गाँउ हो, एक सा केहि अगाडी फिरा को सामना देखि छ जहां वास्तव मा राम्रो होटल र रेस्टुरेन्ट हो। तथापि, यो प्यारी छ, र त्यहाँ कार्टरसोसबाट एक सडक हो जुन एक्वो गिलिएोस बीचको किनारमा पुग्छ, कालो ज्वालामुखी कछुए र सुन्दर, निलो, पानी संग केहि हदसम्म टाढाको समुद्र तट।
साथै, तपाईं हाम्रो फ्लेक्स मित्रहरू हेर्न चाहनुहुन्छ!
कहाँ बस्ने: Ikaros Hotel सानो, सहज, र किफायती छ कि फिरा टाउनको तुरुन्त पहुँच संग।
त्यहाँ सैंटोरेनीको अन्य साना गाउँहरू र क्षेत्रहरू छन्, यी सातहरूले सबै बजेटका यात्रीहरूको लागि उत्कृष्ट आधार प्रदान गर्नुपर्छ जसले सान्टोरेनिमा कहाँ बस्न खोज्छ। हाम्रो सिफारिशहरू जाँच्नुहोस्, र सान्टोरेनीमा तपाईंको समयको आनन्द लिनुहोस्!
सैंटोरेनिको लागि उपयोगी यात्रा संसाधन
Santorini मानचित्र - यो सजिलो नक्साको साथ स्यानटोरोनिको वरिपरि तपाईको यात्राको योजना बनाउनुहोस्
RentalCars.com - भाडामा भाडाको कार मूल्यहरूको तुलना गर्न
Skyscanner.net - सस्तो एयरलाइन उडानहरू बुक गर्न हाम्रो मनपर्ने स्थान
Expedia.com - पुस्तक सस्ती आवास वा बन्डल उडानहरु र होटल सैंटोरेनिमा।
सिफारिस गरिएको गाइडबुक: लोनली ग्रह ग्रीक आइलैंड्स
सुझाव गरिएको पढाइ: सैंटोरेनीको ढोका
श्रेणी: आवास, युरोप, ग्रीस, होटल, सर्वाधिक लोकप्रिय, यात्रा योजना टैग: akrotiri, fira town, greece, होटल, megalochori, oia, santorini, कहाँ बस्ने
← बार्सिलोनामा कहाँ बस्न
शेफ र दीशः अन्तरराष्ट्रीय फूड्सको लागि उत्तम अनुभव →
8 टिप्पणिहरु "कहाँ स्यानोटोनिमा रहन"
यो वास्तवमा राम्रोसँग थाहा छ कुन क्षेत्र कुन स्यानोटोनीमा प्रस्तुत गर्दछ। विशेष गरी यो जान्न राम्रो छ कि हामी कहाँ सर्वोत्तम सूर्यास्त देख्न सक्छौं। फिरा र ओया भन्दा अन्य ठाउँहरू पर्यटकहरू जस्तो देखिन्छन। निश्चित रूपमा ती भेट्न चाहानुहुन्छ।
जस्टिन र ट्रेसी
धन्यवाद! तपाईं वास्तवमा सही हुनुहुन्छ - अन्य क्षेत्रहरु को अधिकांश साँच्चै विवेक र आराम मा छन्। सम्भावना बोल्दै, पर्यटकहरूको धेरै थोरै संख्या।
सैंटोरेनी एक निरपेक्ष सपना हो! मेरो चचेरे भाई र उनको प्रेमी अहिले त्यहाँ छन् र यो अद्भुत लाग्छ! यो पोष्ट यति विस्तृत र उपयोगी छ र म त्यसलाई उनीसँग साझा गर्नेछु! बाड्नु भएकोमा धन्यवाद!
तपाई स्वागत छ, अन्िक!
स्टेफनी | theFantasia.com
स्यानोटोनी धेरै धेरै को लागि बाल्टी सूची गन्तव्य हो र म यो कसरी सराहना गर्छु कि तपाई यसलाई यहाँ हटाउनुभयो! म फिरामा बसें तर निश्चित रूपमा चाहिएको छु मैले सूर्योदयलाई पनि पकड्न ओया मा केहि समय बिताएको छु!
पढ्नका लागि धन्यवाद, स्टेफनी, र तपाईले पोस्टको मजा लिनुभयो! यो हाम्रो निश्चित मनपर्ने स्थानहरु मध्ये एक छ
अक्टोबर 11, 2018
हामीसँग थुप्रै भारतीय चलचित्रहरू Santorini मा गोली हानिएका छन् कि यो केही कथाहरूको साथ पर्याय भएको छ। निलो पानीको पृष्ठभूमि र सेतो र नीलो धोएका घरहरू सुन्दर दृश्यको लागि बनाउँछन्!
धन्यवाद, मीनाक्षी! तपाईंले पोस्टको आनन्द लिनुभयो!